Updatedlọ ọrụ m emelitere maka ndekọ vidiyo na pọdkastị | Martech Zone
Updatedlọ Office M emelitere maka ndekọ vidiyo na Podcasting
Friday, July 17, 2020 Tuzdee, Machị 2, 2021 Douglas Karr
Mgbe m batara n’ọfịs ụlọ m afọ ole na ole gara aga, enwere m ọtụtụ ọrụ m kwesịrị ịrụ iji mee ya ohere dị mma. Achọrọ m ịtọ ya maka vidiyo vidiyo na pọdkastị kamakwa ọ na-eme ka ọ bụrụ ebe dị mma ebe m na-enwe ọ spendingụ itinye ogologo oge. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ahụ, yabụ achọrọ m ịkekọrịta ụfọdụ itinye ego m mere na ihe kpatara ya.
Nke a bụ mmebi nke nkwalite ndị m mere:
bandwit - M na-eji Comcast mana ụlọ m anaghị arụ ọrụ, n'ihi ya, m na-agbakarị ụdọ ethernet site na router na ọfịs m mgbe m na-edekọ iji hụ na enweghị m nsogbu bandwidth. Comcast nwere ezigbo ọsọ ọsọ, mana bulite ọsọ dị egwu. M dọtara plọg ahụ ma kwaga Fiber. Companylọ ọrụ ahụ wụnye ya ozugbo na ọfịs m, ugbu a enwere m ọrụ 1Gb ma gbadaa na laptọọpụ m ozugbo! Maka ebe obibi ndị ọzọ, enwere m WiFi eero Mesh sistemụ nke etinyere na eriri site na Metronet.
Ugboro Ngosiputa Atọ - Kama ijikọ ethernet, monitors, USB hub, mic, na ọkà okwu oge ọ bụla m nọdụrụ na tebụl m, achọrọ m. j5Create ebe ntinye USB-C. Ọ bụ otu njikọ na ngwaọrụ ọ bụla abanyela na… tinyere ike.
Nguzo oche - Ebe ọ bụ na m na-agbasi ike, Achọrọ m ịnwe nhọrọ nke iguzo ọtọ ma nwee mpaghara ọrụ sara mbara nke ukwuu iji mee ya. Achọpụtara m maka a Varidesk… Nke e wuru n'ụzọ dị oke mma, ọ dị ezigbo mma, ma daba n'ihe niile dị na ya ka m wee nwee ike ịga site n'ịnọdụ ọdụ. Enweela m ihe nkwado ngosi abụọ nke arụnyere na desktọọpụ mfe.
igwe okwu - Amaara m na ọtụtụ ndị fol hụrụ Yeti n'anya, mana enweghị m ike ịkọwapụta ihe na igwe okwu m. O nwere ike ịbụ olu m, ejighi m n'aka. Achọpụtara m maka ihe Audio-Technica AT2020 Cardioid Condenser Studio XLR igwe okwu na ọ na-ada ma na-ele anya nke ukwuu.
XLR ka USB ọdịyo interface - Igwe okwu bụ XLR, yabụ enwere m a Behringer U-PHORIA UMC202HD, Oghere 2 ọdịyo interface inupụ ya n'ime ebe ntibànye.
Podcast Ogwe aka - Ogwe aka Podcast dị ala na-adị mma na vidiyo nwere ike ịdị oke ọnụ. Achọpụtara m maka Pọdkastị Pro ọ dịkwa mma. Naanị ihe m mejọrọ na nke a bụ na igwe okwu dị n'okpuru ibu nke e mepụtara esemokwu ogwe aka maka ya mere m ga-eji velcro mee ihe na ogwe aka iji mee ka ọ kwụsie ike.
Igweisi Amp - know ma etu o si bụrụ mkpari iji lekọta ma ọ bụ dozie ndapụta ụda site na sọftụwia, yabụ achọrọ m PreSonus HP4 4-Channel Compact Headphone ampilifaya kama ebe m nwere nti, ekweisi studio, na usoro ụda olu gbara gburugburu. Nke a pụtara na m mmepụta bụ mgbe otu ihe… M nnọọ tụgharịa ma ọ bụ ala nke ekweisi m na-eji ma ọ bụ ogbi nke ileba anya mmepụta.
ọkà okwu - Achọrọ m nnukwu ndị ọkà okwu maka ọfịs na-agbakwunye na nyocha nyocha nke isi okwu, yabụ m jiri ya Logitech Z623 400 Watt Home Ọkà Okwu System, 2.1 Ọkà Okwu Sistem.
kamera - Otu n'ime nsogbu m na-agba n'ime nke m na-ekwu maka ya na vidiyo ahụ bụ nnukwu ntigbu na kamera ochie m… yabụ emechara m kwalite Logitech BRIO nke nwere otutu nhọrọ ma na - emekọ nchapụta ka mma - ịghara ịkọ ya nwere mmepụta 4K.
Nweta weebụcam: Logitech BRIO
Otu okwu ị ga - ahụ na vidiyo mbụ ahụ bụ kamera ahụ dị oke egwu na-emeso ndị na-enyocha m ihere mgbe m nwere nnukwu windo ọcha na ihuenyo. M kwalitere webcam ka a Logitech BRIO, kamera 4K kacha elu na ọtụtụ nhazi na nhọrọ ndekọ. Nwere ike ịhụ nsonaazụ dị n'elu.
Ntọala ahụ dị egwu ma enwere m telivishọn mara mma na ụda ụda n'akụkụ m iji lelee ihe nkiri ma ọ bụ gee telivishọn mgbe m na-arụ ọrụ.
Tags: apụlteknụzụ ọdịyobehringerebe ntibànyengwáeririụlọ ọrụulo Podcast studioulo video ụlọinternetndụ iyi n'ụlọ ọrụMacBook Prometronetigwe okwu ogwe akapọdkastị propresonusoche guzoroeririNnọọwebcam
Okwuokwu: Quantify, Generate, and Optimize Detuo na AI